Manchester United iyo Chelsea oo kor ka eeganaya xaalada xidiga kooxda Juventus – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Manchester United iyo Chelsea oo kor ka eeganaya xaalada xidiga kooxda Juventus
Sabti, Feberaayo, 9, 2019 (HNN)- Kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa waxay isha ku hayaan xaalada xidiga Juventus, iyaga oo rajo wanaagsan ka qaba inay lasoo saxiixdaan, kadib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo aadan.
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu sheegay in kooxaha United-ka iyo Blues ay isha ku hayaan xiriirka aan wanaagsaneyn ee ka dhexeeya Paulo Dybala iyo macalinka Juventus ee Massimiliano Allegri.
Wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in arintaan ay albaabada u furi doonto ka tagista Paulo Dybala ee kooxda Bianconeri
Dybala ayaa go’aansaday inuu ka tago kursiga keydka ka hor dhamaadkii ciyaartii dhex martay kooxaha Juventus iyo Parma ee horyaalka Serie A, wuxuuna u dhaqaaqay qolka labiska kooxda, isagoo ka xanaaqay sababta uu kaga qeyb gali waayay kulankan.
Massimiliano Allegri ayaa dhankiis sheegy inuu ka carooday hab dhaqankii uu sameeyay laacibka reer Argantina ee Paulo Dybala, wuxuuna ugu dambeyntii ka bixiyay raali galin.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Dybala uu horey u sheegay suurtogalnimada uu ugu dhaqaaqi karo United, sababa la xiriira sida uu u xiiseenayo in uu markale Paul Pogba kaga garab ciyaaro kooxda Red Devils, kadib markii ay si wada jir ah kaga soo wada ciyaareen Juventus.
Manchester United iyo Chelsea oo kor ka eeganaya xaalada xidiga kooxda Juventus added by admin on 09/02/2019